कोरोना कहर : विपन्‍नलाई राहत दिलाउन मेयर खोज्दै जनकपुरका वडाध्यक्षहरू – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख १० गते १३:५४
काठमाडौं आउने तीन मुख्य नाका, प्रहरीलाई छलेर दैनिक सयौंको प्रवेश
सधैं गुल्जार गाउँ त्रसित र सुनसान!
चीनसँग सामान खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग
कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न मुलुक ‘लकडाउन’मा गएको एक सातापछि चैत १६ मा प्रदेश २ सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई स्थानीयतहमार्फत् राहत पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो।
सर्वदलीय बैठक लगत्तै बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको थियो।
निर्णयअनुसारको रकम पठाउँदै स्थानीय तहलाई पनि सोहीबराबरको रकम थपेर ‘लकडाउन’ को मारमा परेका विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई भनेको थियो।
चार दिनअघि प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहतसमेत घोषणा गरिसकेको छ। पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत् सामान खरिद गरेर वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी सोझै पीडित परिवारसमक्ष राहत पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रभावित परिवारका लागि दोस्रो चरणको राहतको घोषणा गरिसके पनि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पहिलो चरणको राहतसमेत वितरण हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले पहिलो चरणको राहत दिन रकम पठाएलगत्तै उपमहानगरले गरिब तथा विपन्न परिवारको तथ्यांक पठाउन सबै वडालाई पत्राचार गर्‍यो। उपमहानगरको पत्रअनुसार सबै वडा कार्यालयले तथ्यांक पठाएको पनि १० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्रका गरिब तथा विपन्न परिवारले हालसम्म सरकारी राहत पाउन सकेको छैनन्।
‘लकडाउन’ का कारण प्रभावित गरिब, विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्दै आइरहेकाहरू विचल्लीमा रहे पनि उपमहानगरपालिकाले चासो नदिँदा राहत वितरण हुन नसकेको हो। लकडाउन लागू भएको एक महिना पुगिसके पनि राहत वितरण नहुनुमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह प्रमुख जिम्मेवार रहेको भन्दै वडाध्यक्षहरू उनीविरुद्ध खनिएका छन्।
मेयर साह कमिसनको खेलमा फसेकाले गरिब तथा विपन्न परिवारले राहत पाउन नसकेको भए पनि गुनासो आफूहरूले सुन्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन्।
२५ मध्ये जनकपुरधामका १७ जना वडाध्यक्षहरूले बुधबार बैठक बसेर प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन मेयर साहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
एक महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण विपन्न परिवार दुई छाक टार्न समस्यामा रहे पनि मेयर साहले चासो नदिँदा हालसम्म राहत वितरण हुन नसकेको वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष जानकीराम साहले बताए। विपन्न परिवारका लागि राहत उपलब्ध गराउन बोर्ड बैठकबाटै आफूहरूले निर्णय गरिसके पनि मेयरले खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ।
वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष परमेश्वर साहले राहतमा पनि कमिसन लिने लोभमा मेयर फसेका कारण उपमहानगरमा राहत वितरण हुन नसकेको बताए।
‘गरिबलाई वितरण गरिने राहतमा पनि कमिसन आओस् भन्ने उहाँको चाहना छ, कहाँबाट बढी कमिसन आउँछ खोज्दै हिँड्नुभएको छ, कमिसनकै खेलका कारण राहत वितरण हुनसकेको छैन,’ वडाध्यक्ष साहले भने।
‘मेयरले विराटनगरबाट चामल मगाउनुभएको सुनेको छु। अन्य जिल्लाले जनकपुरबाट खाद्यान्न लगिरहेको छ, तर उहाँले बाहिरबाट मगाउनु भएको छ,’ उनले थपे, ‘जनकपुरमै खाद्यान्न उपलब्ध हुँदाहुँदै बाहिरबाट किन मगाउनुपरेको होला? सबै कमिसनको खेलजस्तो लागेको छ।’
वडा नम्बर २० का अध्यक्ष भोगेन्द्र झाले मेयरको ढिलासुस्तीका कारण कोरोना महामारीभन्दा पनि आफ्नो वडाका विपन्न परिवार भोकमरीले ज्यान गुमाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताए।
विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत मेयरले चासो नदेखाएको झाको भनाइ छ। ‘जनताका पीडा बुझ्न सक्नुहुन्न भने पदमै किन बस्नुपर्‍यो, छोडे भइहाल्यो नि,’ उनले भने।
वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष शुभनारायण मण्डलले सामाजिक संघसंस्थाको सहयोगमा वडाध्यक्षहरूले प्रभावित परिवारका लागि राहत उपलब्ध गराए पनि पर्याप्त नरहेको बताउँछन्। सरकारले राहत वितरण गर्न पैसा पठाइसके पनि मेयरले चासो नदिँदा गरिब परिवारले राहत पाउन नसकेको मण्डलले बताए।